Waan ixtiraameynaa asturnaantaada
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Isku-dheelitirka Isku-dheelitirka Kiimikada
Isku dheellitirka Kiimikada, oo laga heli karo chemicalequationbalance.com, mid ka mid ah ahmiyadeena ugu muhiimsan waa asturnaanta martidayada. Dokumentigan Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wuxuu ka kooban yahay noocyo macluumaad ah oo la soo ururiyay oo la duubay Miisaanka Isku-dheellitirka Kiimikada iyo sida aan u isticmaalno.
Haddii aad qabtid su'aalo dheeraad ah ama aad u baahan tahay macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Nidaamkayaga Asturnaanta, ha ka labalabeyn inaad nala soo xiriirto.
Isu dheellitirka Kiimikada ayaa raacaya nidaamka caadiga ah ee loo adeegsado faylasha galka. Faylashaani waxay galiyaa martida markay booqdaan boggaga internetka. Dhammaan shirkadaha martigelinaya waxay sameeyaan tan iyo qayb ka mid ah martigelinta adeegyada 'falanqaynta. Macluumaadka lagu ururiyey faylasha log waxaa ka mid ah cinwaanada borotokoolka internetka (IP), nooca biraawsarka, Bixiyaha Adeegga Internetka (ISP), taariikhda iyo waqtiga shaabadda, bogagga tixraaca / bixitaanka, iyo suurtagalnimada tirada qasabadaha. Kuwaani kuma xirna wax macluumaad ah oo shaqsi ahaan la aqoonsan karo. Ujeedada macluumaadku waa falanqaynta isbeddellada, maamulka goobta, la socoshada dhaqdhaqaaqa isticmaalayaasha websaydhka, iyo ururinta macluumaadka dadka.
Google waa mid ka mid ah iibiyaha saddexaad ee boggayaga. Waxa kale oo ay isticmaashaa "cookies", oo loo yaqaano "cookies cookies", oo loo adeegsado xayeysiis loogu talagalay booqdayaasha boggayaga oo ku saleysan booqashadoodii www.website.com iyo goobaha kale ee internetka. Si kastaba ha ahaatee, martida ayaa dooran kara inay diidaan isticmaalka cookies DART adigoo booqanaya xayeysiiska Google iyo shabakada Nidaamka Xogta Khaaska ah URL - https://policies.google.com/technologies/ads
Waxaad la tashan kartaa liiskan si aad uga hesho Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah mid kasta oo ka mid ah la-hawlgalayaasha xayeysiinta ee Balancer Isku-dheelitirka Kiimikada. Siyaasadeena Qarsoodiga ah waxaa la abuuray iyadoo la kaashanayo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Bilaashka ah iyo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Online.
Ogsoonow in Balance Balaadhinta Kiimikadu aysan marin u lahayn ama xakamayn karin cookies-yadaas ay adeegsadaan xayeysiistayaasha dhinac saddexaad.
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Miisaanka Isku-dheellitirka Kiimikada ma khuseeyo xayeysiistayaasha kale ama bogagga internetka. Sidaa darteed, waxaan kugula talineynaa inaad la tashato Xeerarka Qarsoodiga ah ee khuseeya xafiisyadan xayeysiinta ee dhinac saddexaad si aad u hesho macluumaad faahfaahsan. Waxaa ku jiri kara dhaqankooda iyo tilmaamaha ku saabsan sida looga baxo xulashooyinka qaarkood. Waxaad ka heli kartaa liistada dhameystiran ee Xeerarkan Asturnaanta iyo xiriiriyeyaas halkan: Xiriirimaha Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Waad dooran kartaa in aad kuxariso kukiyada adiga ikhtiyaar biraawsarkaaga ah Si aad u ogaatid macluumaad aad u faahfaahsan oo ku saabsan maaraynta cookie oo leh biraawsarro khaas ah, waxaa laga heli karaa bogagga internetka ee bogagga internetka. Maxay yihiin Kukiyada?
Qayb kale oo ka mid ah mudnaanta annagu waa kordhinta ilaalinta carruurta markaad internetka isticmaasho. Waxaan ku dhiirigelinaynaa waalidiinta iyo dadka ilmaha masuulka ka ah in ay fiiriyaan, ka qaybqaataan, iyo / ama kormeeraan ayna hagaan waxqabadkooda internetka.
Isku dheelitir la'aanta kiimikada si ogaal la’aan ah uma soo uruuriso wax macluumaad ah oo lagu garto shaqsiyaadka kayar 13 sano. si dhakhso leh uga saar macluumaadka noocaas ah diiwaankayaga.
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wuxuu khuseeyaa oo keliya waxqabadyadayada onlaynka ah wuxuuna ansax u yahay booqdayaasha degelkeenna iyadoo la tixraacayo macluumaadka ay wadaageen iyo / ama ay ka soo ururiyeen Isku dheelitirka Kiimikada. Siyaasaddan laguma dabaqi karo wixii macluumaad ah ee laga soo uruuriyo qadka ama marinnada aan ka ahayn degelkan.
Adigoo isticmaalaya boggayaga internetka, waxaad halkan ku ogolaatay Nidaamka Qarsoodiga ah waxaanan kugula heshiinay Shuruudaha iyo Shuruudaheeda.